U-Liudmila Pavlichenko kunye noVasili Záitsev. Abona bantu babulala abantu baseRussia. Iinkumbulo | Uncwadi lwangoku
Iguqulelwe okokuqala I-sniper sikaStalin, Ubomi bukaLiudmila Pavlichenko, kwaye i Izikhumbuzo zeSniper eStalingradnguVasili Záitsev, mhlawumbi yenye yezona zidumileyo kwiMfazwe yesibini yeHlabathi.
Kwaye ke ngabaphangi, loo majoni angabonakaliyo achanekileyo kwaye ayabulala, ahlala evelisa umdla okhethekileyo kwinyani nakwintsomi. I-protagonists yezo ncwadi kunye namabali abo ayenyani. Kwaye sele siyazi ukuba inyani ihlala igqitha kwiintsomi. Namhlanje ndinikezela eli nqaku kuwe.
1 Iimpimpi kunye nam
2 UStalin's Sniper - uLiudmila Pavlichenko
3 Izikhumbuzo zeSniper eStalingrad - UVasili Zaitsev
Iimpimpi kunye nam
«Thina madoda siyayithanda imfazwe, Uqabane Sukarov, imfazwe, imbeko nozuko lokuba ukufa kulawula ukusasaza ngobulungisa nangaphandle kwaso ». Lelinye lamabinzana enoveli yam yokugqibela endikhe ndayikhupha. Ndenza umlinganiswa omncinci, owayengumvukeli waseRussia, yitsho kwi-protagonist, uNikolai Sukarov. BakwiSoviet Union ukusuka ngo-1944.
Ndiyayithanda iMfazwe yesibini (II) yeHlabathi Ngokucacileyo kwaye loo noveli yayingumnikelo wam othobekileyo kwisiqendu sembali esibi. Kwaye bendihlala ndinomdla ngakumbi ngaphambili kweYurophu, ngakumbi olo hlaselo lwaseJamani eRashiya. Ke ndibeke, kubhekiswa kuphela, hayi kwingxelo ngokwayo, kummeli wam ophambili kumadabi e EMoscow, eStalingrad naseKursk. Kwaye eStalingrad yangqamana nayo Khrushchev kwaye, ewe, kunye UVasily Zaitsev, nangona engakhange azifumane kuba engabonakali, engumoya. Akunjalo ULiudmila Pavlichenko, oyingozi ngakumbi kunoZaitsev kodwa engaziwa kakhulu kwaye ngubani owayekwezinye iinkalo.
Nam ndiyavuma ubuthathaka bam kubo, snipers. Ngapha koko, omnye umntu ophambili kumabali am ngumcuphi ovela kwiminyaka yama-50 owayekwangumcuphi ngaphambili waseYurophu kwaye uxelela amanye amava kumntu wokuqala. Ngamanye amagama, bendifuna ukungena kulusu lukhethekileyo kumbono njengakude, owasemzini kunye nokungazi njengam. Kodwa yile nto eyoncwadi, ukungena kolunye ulusu kunye nesini, kwaye uphile ngamanye amaxesha nobunye ubomi. Okanye bacinge. Y IZáitsev kunye nePavlichenko zizinto endikhombise kuzo.
Ngoku amabali abo ahlangana kwiivenkile ezithengisa iincwadi Kwaye, kubalandeli bohlobo lwemfazwe kunye neebhayografi, zibalulekile.
Isitshixo sikaStalin - ULiudmila Pavlichenko
Xa uHitler wahlasela iRussia ngo-1941, uLiudmila Pavlichenko wangena emkhosini waseSoviet kwaye wacela ukuba abelwe ukuhambahamba kwaye uphathe umpu. Wayengowokuqala kwi Ukuzikhusela eOdessa kwaye kamva kwidabi lase Yintso. Kuloo macala wabulala 309 iintshaba kunye nompu wakhe, kwaye waba ngoyena mntu ubalaseleyo kwimpixano, ebalasele ngaphezulu koogxa bakhe abangamadoda njengoZaitsev.
Un udaka wamonzakalisa ngo-1942, wemka ngaphambili wathunyelwa Ukusasazwa kwe-propaganda eCanada nase-United States. Apho wanika iinkomfa ezininzi noonondaba kwaye wayekwimisitho emininzi yezopolitiko. Waye wahlaliswa kwi-White House kwaye waqala ubuhlobo obuhle kunye Eleanor Roosevelt. Wafumana umhombiso we Iqhawekazi leSoviet Union Waqhubeka ekhonza kwi-Red Army enikeza iintetho kunye neenkomfa zamazwe ngamazwe kude kube ngo-1953.
Ukuphela kwemfazwe, wakwazi ukugqiba eyakhe Izifundo zembali ebepake. Kwakungeyakhe Iidayari zemfazwe abo bamncedileyo ukubhala ezi memoirs. Kubo wabalisa ukungakhuseleki kunye nokungaqiniseki kwemihla ngemihla yokulwa. Kwaye neyabo Amava obuqu, njengobudlelwane bakhe noLieutenant Alexei Kitsenko, awatshata naye. Usweleke eneminyaka engama-58 ngenxa yesifo sentliziyo.
Izikhumbuzo zeSniper eStalingrad - UVasily Zaitsev
UVasily Zaitsev, umzingeli ozelwe kwiiUral, wayengumdubuli ngaphandle kwesiqhelo. Kwakhona wafunda i-accounting kwaye waye umhloli weinshurensi. Ngo-1937 bambizela phezulu kwaye wayefana umatiloshe kwiPacific Fleet. Emva koko wacela ukutshintshelwa kwinkampani ye umpu kwaye yaphela ngo IStalingrad. Apho wabulala AmaJamani angama-242 kunye nabanye abatoli abali-11 botshaba. Uphumelele imihombiso emininzi, kubandakanya iGorha yeHlabathi yeHlabathi yeSoviet Union.
Le ncwadi ikhutshiweyo ngoku yile iakhawunti yobuqu yamava abo Ekulweni, kwaye kwelo dabi kuthathelwa ingqalelo elona ligazi embalini. Kodwa iqala ngeyakhe ebuntwaneni, ngenxa yendlela utatomkhulu wakhe, ukusuka kumgca omde wabazingeli abavela kwiiUral, wamnika umpu wakhe wokuqala. Kwaye wafunda njani ukui-astrear kunye ne-stalk ebulala iingcuka. Ke kukho ubungqina obuninzi malunga nabo izabelo kwaye ngokucacileyo imbono yakhe kwimbali iyathobela. Inika abaninzi iingcebiso kubaphangi, enyanisweni, kamva waba ngumhlohli.
Umlawuli waseFransi UJean-Jacques Annaud uthathe imovie kwi 2001 ubume bakhe kwi Utshaba kwiiGates, eneenkwenkwezi ezithambileyo kwaye mhle kakhulu UYuda umthetho. Yayiyinguqulelo engaphumelelanga, kunye nobuxoki obuninzi bebali lasekuqaleni, kodwa oko inokubonwa ngokufuna ukwazi kunye nokucwangciswa ngononophelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Iincwadi » IPavlichenko kunye neZáitsev. Abona bantu babulala abantu baseRussia. Iinkumbulo
UBeatriz Osés kunye noAndrés Guerrero. I-SM i-Steamboat kunye ne-Wide Angle Awards
Uncwadi oluyimbuyekezo: Ukubuyiselwa kwemali kufikelela kuncwadi ngesandla kunye netekhnoloji entsha.